Ogaden News Agency (ONA) – Shirweynihii JOKA oo hakiisii ka sii socda soona bandhigay arimo ku cusub hawlaha jaaliyadaha
Shirweynihii JOKA oo hakiisii ka sii socda soona bandhigay arimo ku cusub hawlaha jaaliyadaha
“Shalay waxaan is lahaa waxba laysuma dhaafin maantase waxaan is dhahay shalay waxba laysuma sheegin”
“Waxaa markale inoo furmay shirkeenii Q2aad” ayuu cod waafi ah ku yidhi daadihiyaha shirku. Waxaa igu cusbayd wax aana horay ugu arkin shirarka noocaan oo kale ah waxayna ahyd markii la shaaciyay in xayaysiis iyo dalabaad loo samayn doono farshaxan iyo murti ay sameeyeen ciyaal ree Ogadenia ah. Aad ayaanuna dhamaanteen u sugaynay waxa ay noqoto iyo waxay kusoo kordhin karto shirka. Aniga iyo saaxiibkayna waxaanu isu diyaarinay inaanu dhacdadan ku xidhiidhino ballantii caruurtii shalay hadashay.
Inta uu sacadaha shirku sii badanayeen waxaa Sidoo kale soo badanayay tirada dadka waxaana soo kordhayay xiisaha barmaamijyada: waxaa lama iloobaan ahayd heeso xasuus kule halganka dhexdiisa iyo gabayo murtidoodu wayntahay oo si talan taali ah isugu dabamarayay nasinta dhagaha dadwaynaha.
Aad ayay umuuqatay hor marka bulshada Ogadeeniya ee Koonfur Afrika ay ka gaadhay dhinaca dhismaha bulshada. 300 oo ruux ayaa si asluubleh u dhagaysanayay warbixino ku saabsan hawlihii sanadkan, iyadoo ayna marnaba anshaxa iyo agaasinka shirku isbadalin ayay si habsimileh isugu dhiibeen codbaahiyaha gudiyadii shaqada ee sanadkii hore “waxaan sibuuxda uwareejiyay xilkii ummaddu iidhiibatay” ayay cod wadaniyadeed oo siman ugusheegeen dadwaynaha.waxaana markiiba ladoortay gudi farsamo iyo mid xeer beegti oo uqaybsanhawlaha dib u eegida xeerka iyo dhismaha gudi cusub oo labadaba barito lamudaystay.
Barmaamijka bandhiga ciyaalka iyo farshaxankooda laguma laclaafin aniga iyo saaxiibkayna waxaanu heley daqiidado aanu ugu diyaargarawno dhacdadan kadib nasasho kooban oo laqaatay.
Waxaanu marti u noqonay dilaal cod furan oo bilaabay naadinta qalab farshaxan ah iyo tartamayaal u hamuum qaba hanashada qalabka ugu wanaagsan. ’Gabayga ugu horeeya waxaa qoray Amran qiimaha bilawga ahna waa R500 yaa kudaray’ ayuu ku bilaabay. Dilaalkii tartanka cidna cid ugama tanaasulin qolo kstana way laba jibaartay sixirka Gabayga oo qiimahiisa la gaadhsiiyay $1500.
Waxaa xiiso gaar ah lahayd in waxyaabihii lasoo bandhigay oo ahaa 3ex gabay oo ay qoreen ciyaal da’doodu u dhaxayso 12,10.9 jiro dhamaantood qiimahooda la gadhsiiyay meel sare laguna qaatay wixii lagu baayacay bilawgii 100 jibaarkeed waxaana la rajaynayaa in markale gobolada kaleeto lageeyo farshaxankaas xayaysiikan oo kaleetana loo sameeyo.
Jawigaas wanaagsan muuna ahayn mid cimridheer yeeshey waxaana quluubteena markale rogey barmaamij muuqaal ah oo nin dhalinyar soo jeediyay ;waxaa soo muuqatay gabadh da’yar oo dameer in biyo ah kuwada oo ciidama tigreegu ku falaadayaan iyo hooyo waayeel ah oo dhabankeeda ku qalashay illin aana qiyaasayn goor ay ahayd balse aan garankaro sababta kakeentay.
Ugu danbayntii dareenkeenu wuxuu noqday mid murugasan. Marwaxaa noo muuqday bulsho ka xorawday maskaxda horayna u socota marna waxaa noo muuqday bulsho wax badani qabyo ka yahay una baahan wadajir iyo naf-huris.
Fari kamaqodna faalooyinkii xarunta … losoco gunaanadka barito hadii eebe yidhaahdo.
Xayi iyo saaxiibokale/JOKA.
waxaan aad usalaa mayaa dadka aan aadka ujeclahay ee jooga south africa guulaysta waxaan leeyahay waxaad tihiin idinka iyo ciidanka qalabka sida ee jxwo number one and two waxaan u soo jeediniyaa jaaliyadaha kale in ay noqdaan sida reer south africa oo kale adeer waa lakala baxay waana lakala mudanyahay hadhowto in sha alaahu